Ntughari ohuru nke AGL UCB 9.0, ihe omuma nke uwa nile maka ugbo ala, di njikere | Site na Linux
Versiondị ọhụrụ nke AGL UCB 9.0 dị njikere, usoro ikpo okwu zuru ụwa ọnụ maka usoro ụgbọ ala
Ntọala Linux gosipụtara mbipụta ọhụrụ nke nkesa AGL UCB 9.0 (Automotive Grade Linux Unified Code Base) nke etolitere dị ka ikpo okwu zuru ụwa ọnụ maka ojiji na ọtụtụ sistemu ụgbọ ala, site na dashboards na usoro infotainment automotive.
Ihe nkesa ọ dabere na mmepe nke ọrụ Tizen, GENIVI na Yocto. Ebe eserese eserese sitere na mmepe Qt, Wayland, na Weston IVI Shell.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ metụtara mmepe ahụ nke oru ngo gụnyere ụdị ndị ama amaDị ka Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi na Subaru.
1 Banyere AGL UCB
2 Main atụmatụ ọhụrụ nke AGL UCB 9.0
Banyere AGL UCB
Ndị na-akpaghị aka nwere ike iji AGL UCB dị ka ntọala maka ịmepụta ngwọta ikpeazụ, mgbe ha mezigharịrị ihe ndị dị mkpa maka akụrụngwa na ịhazi nke interface.
Ikpo okwu na-enye gị ohere ilekwasị anya na mmepe ngwa yana nke gị ụzọ iji hazie ọrụ onye ọrụ, n'echeghị echiche banyere akụrụngwa dị ala na ibelata mmezi mmezi.
Ihe oru ngo a meghere kpamkpam: ihe niile dị n'okpuru ikikere n'efu. A na-enye usoro ihe eji arụ ọrụ nke ngwa ndị eji ede HTML5 na teknụzụ Qt n'elu ikpo okwu.
Dịka ọmụmaatụ, enwere mmejuputa ihu igwe, ihe nchọgharị weebụ, ntaneti, usoro igodo (iji Google Maps), njikwa ihu igwe, ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi nwere nkwado DLNA, interface maka ịhazi usoro ihe ọdịyo, mmemme maka ọgụgụ ozi.
A na-enyekwa ndị ọzọ maka njikwa olu, ịghachite ozi, mmekọrịta na smartphone site na Bluetooth na njikọ na netwọk CAN maka ihe mmetụta sensọ na ịnyefe data n'etiti ọnụ ụgbọ.
Main atụmatụ ọhụrụ nke AGL UCB 9.0
Ọhụrụ a mbipụta na nkwado dị mma maka ọrụ na ntọala netwọk, yana arụmọrụ dịwanye mma nke ngwa HTML5, Tụkwasị na nke ahụ, e megharịrị API maka Bluetooth ma kwado maka pbap Bluetooth na profaịlụ map.
Ngwa dabere na HTML5 ha agbakwunyere nkwado maka nnweta dabeere na akara ngosi, ihe onyonyo nwere sọsọ HTML5 ka atụpụtara iji Web App Manager (WAM) na Chromium na agbakwunye demo HTML apps maka ihuenyo ụlọ, Ngwunye ngwa, Dashboard, Configurator, Media Player, Mixer, HVAC, and Chromium Browser.
N'aka nke ọzọ, edere mmejuputa ntinye nke ngwa dị na QML, nke a bụ ihe atụ nke mmelite emelitere nke dashboard na-akwado nhazi nke ozi CAN site na ntanetị na bọtịnụ multimedia, nke ọzọ bụ ikike iji bọtịnụ na steeringi wiil iji jikwaa usoro ihe akụrụngwa.
Ọzọkwa, Nkwalite ngwaike maka: Renesas RCar3 BSP 3.21 (M3 / H3, E3, Salvator), SanCloud BeagleBone enwekwukwa na nkwado maka Akpaaka Cape, i.MX6 na Raspi Pi 4.
Banyere mmelite, agbakwunye nkwado maka nnyefe melite OTA (N'elu-ikuku) maka gburugburu dabere na teknụzụ OSTree, na-enye gị ohere ịmegharị onyonyo nke sistemụ ahụ n'ozuzu ya nwere ikike imelite faịlụ ọ bụla na mbipute ọnọdụ izugbe nke sistemụ ahụ.
Nke mgbanwe ndị ọzọ nke na-apụta site na ụdị ọhụrụ a bụ:
Framework na-etinye ikikere dabere na ikike.
Agbasawanye API maka mmata okwu na mmelite mmekọrịta na ndị na-ekwu okwu.
Nkwado agbakwunyere maka Alexa Auto SDK 2.0.
A na-atụpụta ụdị ọhụụ mepere emepe maka ijikwa nghọta okwu.
Ngwa ọdịyo emeela nkwado dị mma maka ihe nkesa mgbasa ozi PipeWire na njikwa nnọkọ WirePlumber.
Ntughari mmejuputa nke ihu ulo ohuru na njikwa window ka atuputara (rụọ ọrụ site na ịhọrọ 'agl-composer').
N'ikpeazụ, maka ndị nwere mmasị ịnwale usoro ihe a, ha kwesịrị ịma nke ahụ ewuru ewu wuluru mbadamba QEMU, Renesas M3, Intel Up², Ras Piberry Pi 3 na Ras Pi 4.
Na mgbakwunye na itinye aka na obodo, a na-emepe ụlọ maka NXP i.MX6, DragonBoard 410c, Intel Minnowboard Max (Atom E38xx), na TI Vayu osisi. Koodu edere nke ihe oru ngo a di site na Git.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Versiondị ọhụrụ nke AGL UCB 9.0 dị njikere, usoro ikpo okwu zuru ụwa ọnụ maka usoro ụgbọ ala
BleachBit 4.0.0: Ọhụrụ ọhụụ na ndozi, ndozi na mgbanwe